Mahara Software - Linux Vakapindwa muropa | Linux Vakapindwa muropa (Peji 3)
VirtualBox 6.1.4 yasvika kuti iwedzere rutsigiro rwechazvino vhezheni yeLinux kernel nedzimwe nhau dzisingafadzi.
Mushure memakore mana ekuvandudza, iyo nyowani vhezheni yechirongwa chakakosha chekupenda kwedhijitari MyPaint 2.0.0 yakaburitswa ...
Waterfox, parizvino mune yayo 2020.2 vhezheni, ndeyeFirefox-yakavakirwa browser inovimbisa rutsigiro rweasina simba Hardware.
Blender 2.82 ikozvino yave kuwanikwa zviri pamutemo uye inouya nekuwanda kugadzirisa, kusanganisira zvinopfuura chiuru zvigadziriso izvo zvinovandudza mushandisi ruzivo.
OpenSSH 8.2 inosvika nerutsigiro rwe2FA yekusimbisa tokeni
Mushure memwedzi mina yekusimudzira, kuburitswa kweshanduro nyowani yeOpenSSH 8.2 ichangoburitswa, inova iko kuvhurwa kuitiswa ...
Ndakachinjira kuNextcloud. Ichi ndicho chiitiko chekushandisa masevhisi egore anotarisirwa neni pane yangu yewebhu server.
Kubwinya chambuko-chikuva kuraira tambo chishandiso, chakanyorwa muPython, yekutarisa CPU nzvimbo yekushandisa ...
Kupedzisa ne Photoreading, isu tinoongorora yakavhurwa sosi dzimwe nzira dzekuita maviri ekupedzisira matanho enzira.
Chikamu cheKushandisa mu Photoreading. Isu tinoongorora mamwe mafomu efoni anokubatsira kuzviita. Ivo vaviri yakavhurika sosi.
StatusPilatus inokutendera kuti utarise imwe ruzivo rwehurongwa, senge CPU, GPU, RAM, dhisiki yekushandisa, manhamba eneti, ruzivo rwebhatiri ...
PhotoFlare mutsva wemufananidzo mupepeti watinogona kunyora se "Paint dombo". Iyo ine inonakidza dhizaini uye yakakodzera kuyedza
Maawa mashoma apfuura kuburitswa kweshanduro nyowani yeakanyanya kuvhurwa sosi hofisi suite, LibreOffice 6.4, yakaziviswa, vhezheni iyo ...
LosslessCut iElectron-based vhidhiyo uye odhiyo yekucheka chishandiso, LossLessCut chirongwa chiri nyore chinogona kupfupisa mavhidhiyo marefu ...
Pakati pehusiku Mutungamiriri maneja wefaira weiyo Unix-senge masystem uye iri dombo reNorton Commander. Pakati pehusiku Mutungamiriri chikumbiro ...
Nextcloud inosanganisa mashandiro matsva uye inosimbiswa senge imwe nzira mumusika webhizinesi kuHofisi 365 neGoogle Docs.
Aya ndiwo makambani ane simba kwazvo anotungamira munda weyakavhurwa sosi, mamwe acho anogona kukushamisa zvakanyanya
Melody mutambi mutsva wemimhanzi yeGNU / Linux iyo yakanyorwa muVala programming mutauro, uye iyo iwe yaunogona kuwana muAppCenter
Khronos achangobva kuzivisa kuburitswa kweshanduro nyowani yeiyo Vulkan 1.2 kududzirwa, iyo inotsanangurwa seAPI yekuwana iyo ...
Opera 66 yauya neshanduko dhizaini iyo, pakati pezvimwe zvinhu, ichatibvumidza isu kukurumidza kuvhura matabo akavharwa netsaona.
ArangoDB dhatabhesi yemhando dzakasiyana-siyana yakagadzirwa naArangoDB GmbH, izvi zvakanzi pasi rese dhatabhesi ...
Yakakodzera nguva manejimendi ine yemahara software. Mimwe midziyo yekuisa mupfungwa kana zvasvika pakuva nekubudirira.
MPV 0.31 inosvika nerutsigiro rwema skrini muWayland uye mashoma ekuvandudza
Iyo vhezheni nyowani yeakavhurika vhidhiyo inoridza MPV 0.31 yakaburitswa nguva pfupi yadarika, ayo makore mashoma apfuura akaburitsa kubva kunheyo yekodhi yeprojekti MPlayer2
Kuongorora neuroimaging neLinux. Lin4Neuro inzira yakanaka yekutanga
Kuongorora neuroimaging neLInux. Isu tinokurukura kugovera chaiko kutanga chiitiko uye kudzidza nezve yakavhurwa sosi dzimwe nzira.
Buttercup ndeye yemahara password password iyo inochengetera mapassword mu256-bit AES kunyorera.
Vivaldi 2.10 ikozvino yave kuwanikwa kune ese akatsigirwa masystem ane shanduko kune Mushandisi Agent uye yakavandudzwa webhu inoenderana.
Vim 8.2 inouya nerutsigiro rwepop-up windows, zvinyorwa zvemidziyo uye zvimwe
Mune iyi diki vhezheni, mazhinji mabugs akagadziriswa, zvinyorwa zvakagadziriswa, bvunzo yekuvandudzwa yakagadziridzwa, ...
Iyo nyowani vhezheni yeiyo D9VK 0.40 chirongwa chakatoburitswa uye idzi ndidzo shanduko dzakakosha kwazvo
Iyo nyowani vhezheni yeiyo D9VK 0.40 chirongwa ichangobva kuziviswa, iyo inopa kuitiswa kweDirect3D 9, iyo inoshanda kuburikidza ...
KDE yakazivisa kuburitswa kweshanduro nyowani yeKDE Kunyorera 19.12
Iko kuvandudzwa kwaZvita kwekushandisa kwakagadzirwa neiyo KDE chirongwa "KDE Zvishandiso 19.12" zvasvika pakupedzisira ...
Exim, tsamba yekutakura mumiririri yakagadzirirwa kushandiswa mumazhinji masisitimu eUnix, ine mukana mukuru ...
Iyo nyowani vhezheni ye spam kusefa chikuva, SpamAssassin 3.4.3, yakaziviswa uye inouya nhevedzano yeshanduko uye kugadzirisa bug ...
Iyo Gwaro Foundation rakaburitsa LibreOffice 6.3.4, yechina yekuchengetedza kuburitswa mune dzino dzakateedzana dzinouya zvakanyanya kugadzirisa mabugs.
Oracle yakaburitsa nyowani nyowani yekuvandudza kune yayo inoshanda system yekuteedzera software: VirtualBox 6.1 ikozvino inotsigira Linux 5.4.
Mushure memwedzi yakati wandei yekuvandudza, iyo nyowani vhezheni yemahara package yePCB dhizaini michina ichangobva kuburitswa ...
Iyo nyowani vhezheni yeVhura CASCADE 7.4.0 yakaburitswa nguva pfupi yadarika, inova suite ye3D yakasimba uye yepamusoro modelling, kuona ...
Sourcetrail ndeye muchinjika-chikuva sosi kodhi inoongorora yeWindows, macOS uye Linux inoita static ongororo pane kodhi ...
webOS Open Source Edition 2, sisitimu yakakodzera kuyedza pane yako Raspberry Pi 4
webOS Yakavhurwa Sosi Yekushambadzira, hurongwa hunotarisana nekushongedza smart zvishandiso. Iyo chikuva chiri kuvandudzwa mu ...
Blender 2.81 inosvika ichivandudza rutsigiro uye idzi nhau
Blender 2.81 iri pano, yekutanga kugadziridzwa kuburitswa mune dzino dzakateedzana kugadzirisa zviputi nekuvandudza rutsigiro.
Gadzira kugoverwa kweLinux kutsigira sangano remagandanga. Anotaurira anofukidza mumiriri weFBI uye anogona kuenda kujeri
Iko GNOME kalendari application inogonesa kubata kwakanaka kwekugadzwa Inoshanda neese makarenda emunharaunda akaponeswa uye online.
VLC midhiya inoridza inosanganisira akati wandei maficha kune ese ari kutamba emunharaunda akachengetwa vhidhiyo kana odhiyo uye online.
Nzira yekufambisa sei imba yenhau? Nyaya yakabudirira yepepanhau reJanayugom inoratidza maitiro ekubudirira kuchinja kubva kune yekambani kuenda kune yemahara software
Yekutanga yakagadzika vhezheni yeiyo Shinga webhurawuza ichangoburitswa, inoenderana neiyo Chromium injini uye inotarisana nekudzivirira kuvanzika kwe ...
Kuburitswa kweshanduro nyowani yeakakurumbira magiraidhi mupepeti GIMP 2.10.14 yakaunzwa, iyo yakaramba ichivandudza mashandiro uye ichiwedzera iyo ...
Iyo yakanakisa Pomodoro app inonzi Super Kugadzira uye inowanikwa muSnap fomati
Iyo yakanakisa Pomodoro kunyorera kweLinux inonzi SuperProductivity uye inowanikwa muSnap fomati. Ichi chishandiso chinotibvumira kuronga nekudzora.
Kushandisa Python paLinux inzira inonakidza uye yakapusa yekutanga chirongwa. Somutero kuna Guido Van ...
Iyo Gwaro Foundation rakaburitsa LibreOffice 6.3.3, yekuburitsa yekuchengetedza iyo inosvika kugadzirisa huwandu hwese hwe83 bugs.
Python musiki anotsiva basa kubva kuDropbox. Guido van Rossum anga ave aine kambani yekuchengetera masevhisi kwemakore matanhatu nehafu.
Vivaldi 2.9, yazvino vhezheni yebrowser kubva kune yaimbova CEO weOpera, iri pano ine zvakawanda zvitsva maficha, mamwe acho ari mune yayo menyu.
Firefox 70 yave kuwanikwa kurodha pasi, ziva nhau dzayo
Iyo vhezheni nyowani yeakakurumbira Firefox 70 webhu bhurawuza ichangoburitswa kune veruzhinji, neiyi nyowani vhezheni inouya neakawanda ...
Microsoft yakazivisa kuumbwa kweiyo yakavhurwa sosi projekiti, iri OAM, chiyero chitsva chekuvandudza nekumhanyisa kunyorera paKubernetes ...
Iyo Gwaro Foundation rakaburitsa LibreOffice 6.2.8, yechisere uye yekupedzisira kugadzirisa kugadzirisa mune 6.2 yakateedzana hofisi suite.
Mushure memwedzi mitanhatu yekuvandudza, kuburitswa kweOpenSSH 8.1 yakapihwa, inova seti ye ...
Iyo nyowani yeCaliber ebook muoni yakatosiyana neiyo yapfuura, mune ino chinyorwa ini ndinokuudza iwe nezvangu ruzivo.
Zvitsva zvitsva muLLVM 9.0 zvinosanganisira rutsigiro rwekubvisa iyo yekuyedza yekuvandudza tag kubva ku ...
Makore manomwe mushure mekuumbwa kwebazi guru rekupedzisira, kuvhurwa kweshanduro nyowani ye ...
Firefox ichachinja kutenderera kwayo uye ichakurumidza kusvika mavhiki mana, ziva zvese ruzivo rweichi chiitiko.
Iyo yazvino vhezheni yebrowser iri kuwana mukurumbira, Vivaldi 2.8 yasvika neiyo huru ruzivo rwekukwanisa kuwiriranisa neApple.
Richard Stallman: zvimwe panyaya yekusiya basa
Richard Stallman anosiya chigaro kubva kuMIT uye zvakare kubva kuFSF (Mahara Software Siseko). Nhau iro bhomba munyika yepachena software
Iyo GNU GCC compiler yakagadziridzwa pamwe nekuuya kwe gcc 10. Iyo chirongwa chakatangwa naRichard Stallman chinoramba chichienderera mberi kuenda kumiganhu mitsva
Google inovhura maviri akakosha masisitimu ayo ave kuwanikwa pasi peyakavhurika sosi. Inofadza munharaunda kufamba uku
Iyo Gwaro Foundation rakaburitsa LibreOffice 6.3.1, yekutanga kugadziridzwa kuburitswa mune ino nhevedzano kugadzirisa anopfuura makumi mapumburu.
Munguva pfupi yapfuura vhezheni yekutanga yeiyo nushell yekuraira yakaburitswa, iyo inosanganisa kugona kwePower Shell uye yakasarudzika Unix shell ...
LyT19 yadzoka, ndiko kuti, iyo nyowani 2019 edition yeakasarudzika Linux & Tapas chiitiko uko gastronomy uye rudo rweLinux zvinouya pamwechete
Munguva pfupi yapfuura iyo PeerTube 1.4 edition yakaburitswa, inova yakasarudzika chikuva chekutambira musangano ...
Mazuva mashoma apfuura kuburitswa kweshanduro nyowani yeRetroArch 1.7.8 yakaziviswa kuburikidza nechinyorwa, iyo vhezheni iyo inouya ne "AI Service" ...
Ultracopier ikopi faira software, iri sarudzo yakanakisa iyo inotsiva kopi yefaira kubva kune yako faira maneja ...
Notqmail forogo ye qmail
Munguva pfupi yapfuura, yekutanga vhezheni yeiyo notqmail chirongwa chakapihwa, kunova iko kusimudzira kweforogo yeiyo qmail mail server.
OpenDrop chiraira chemutsetse chishandiso icho chinobvumira kugovana faira pakati pemidziyo zvakananga pamusoro peWi-Fi ...
LibreOffice 6.2.6 yatove pakati pedu uye pakati pezvazvinogadzirisa tine bhagi iro rinorwiswa nemunhu ari kure kuita kodhi yekumanikidza.
Mushure menguva ingangoita gore nehafu kubva kuburitswa kwekupedzisira, kuburitswa kweNmap 7.80 network security scanner kwakatangwa ...
Inotevera inowanda, kiyi-inotarisisa webhu bhurawuza yakanyatsogadzirirwa vashandisi vemberi ...
Mushure memwedzi mipfumbamwe yekuvandudza shanduro nyowani yeiyo multimedia package FFmpeg 4.2 yakaburitswa ...
FreeOffice 6.3 ikozvino inowanikwa kurodha pasi. Aya ndiwo matsva eiyi yakavhurwa sosi hofisi suite iwe yaunogona ikozvino kurodha pasi
Mushure memakore mana ekuvandudza, Blender vhezheni 2.80 yasvika. Iyi vhezheni inotarisirwa zvakanyanya nenharaunda uye inounza shanduko dzakakosha kune software.
Ive makore makumi mashanu kubvira pakasvika munhu paMwedzi, uye iyi nhangemutange yese yemuchadenga ine chikwereti chakawanda kusunungura software neLinux
Kamwe zvakare, OpenEXPO 2019 iri kubudirira neiyi 6th Edition yeakakosha chiitiko muEurope pane akavhurika matekinoroji
IPFire 2.23 yakakosha kugadzirisa 134 iri pano kugadzirisa kusagadzikana kunozivikanwa seSACK Panic
Ikozvino yave kuwanikwa IPFire 2.23 yakakosha kugadzirisa 134, inouya kunyanya kugadzirisa kushushikana kunozivikanwa seSACK Panic.
Kuwanika kwekodhi yekodhi kunotendera vanofarira kuvaka yavo Linux kernel inovakira WSL2, kana vachida, kuva ...
Mozilla inoshandisa tekinoroji yeMicrosoft kugadzirisa browser. Iyi ndiyo sisitimu imwechete iyo Windows inoshandisa kuisa zvidzoreso zvaro.
European CERN (European Organisation yeNyukireya Ongororo), kana kereke yesainzi sekudanwa kwazvinoitwa nevazhinji, ...
Iye zvino inowanikwa kurodha pasi uye kumisikidza GIMP 2.10.12, iyo vhezheni inouya kunyanya kugadzirisa zvikanganiso zvinozivikanwa uye nekuwedzera zvidiki zvekuvandudza.
PacketFence inetiweki uye network yekuwana control (NAC) mhinduro inotsigirwa uye inozivikanwa. PacketFence inopa ...
IPFire 2.23 iri pano uye pakati pezvinhu zvayo zvitsva tine mhinduro yeIntel ichangobva kuwanikwa kudzvinyirira MDS.
VideoLAN yakaburitsa VLC 3.0.7, vhezheni nyowani yeakakurumbira multimedia player iyo inosanganisira makumi mana nemaviri ekuchengetedza zvigamba uye nekuvandudza kutsigira kweMP42.
Iyo yakavhurwa sosi chishandiso kubva kuMcKinsey kubvunza ikozvino yave kuwanikwa yekuisa pakombuta yedu. Izvo zvakanaka kune ongororo yedata
Iyo GNU projekiti nguva pfupi yapfuura yakazivisa kuunzwa kweshanduro nyowani yeiyo IceCat 60.7.0 webhu bhurawuza. Kuburitswa kwakavakirwa pa ...
Ikozvino yave kuwanikwa KStars 3.2.3, yazvino vhezheni yekuchengetedza yeiyo 3.2.x dzakateedzana nekugadzirisa uye kugadzirira iyo v3.3 yeanozivikanwa epuraneti.
Iyo nyowani vhezheni yemultiplatform uye yakavhurika sosi yemufananidzo mupepeti Krita yakatoburitswa, iyo ichangosvika vhezheni 4.20 ...
MicroG chirongwa chekudzivirira Android kubva pakuva yakazvimirira inoshanda sisitimu
Iyo purojekiti inonzi microG uye chinangwa chikuru ndechekuunza kunharaunda yeAndroid kuvhurika uye kwemahara kuitiswa kwemaraibhurari makuru
LibreOffice vs. OpenOffice: ndiani achakunda iyo hondo pakati peaya mahofisi suites paLinux?
Muchinyorwa chino tinokurukura mutsauko uripo pakati pemasutu maviri aya kuti ikubatsire kusarudza bheji rako muLibreOffice vs. OpenOffice.
OpenEXPO Europe iri kutogadzirira iyo nyowani 2019 chiitiko uye iine mukurumbira Wakavhurwa Mubairo mibairo iyo inopa muhara emahara matekinoroji
Openpilot ndeye yakavhurwa sosi yakamira yakazvimiririra yekutyaira mumiririri iyo inoita inowirirana cruise control (ACC) uye rubatsiro rwekuchengetedza ...
Space Chikamu Chikamu Muti uye Girafu (SPTAG), muchina unodzidza algorithm yemajini ekutsvaga, ayo anoshandisa vector kutsvaga ...
KDE Nharaunda yakaburitsa KStars 3.2.2, yazvino vhezheni yayo yemapuraneti software iyo inouya kazhinji kugadzirisa bugs.
Jim Whitehurst pamusoro pekuti open source inowedzera sei mikana yedu
Jim Whitehurst anotaura nezve mikana mitsva iyo yakavhurwa sosi inounza kumukurumbira weRed Hat Summit
Red Hat mubairo mutsva mukati meyakavhurika-souce nyika neayo XNUMXth edition Red Hat Innovation Awards
cdlibre.org, chirongwa chakagadzirwa nemudzidzisi wechiSpanish chekuparadzira nekushambadzira yemahara software kunyanya kune vashandisi veWindows
GB Studio ndeye mutambo wekugadzira mutambo wakavakwa neElectron JS uye C-yakavakirwa mutambo injini iyo inoshandisa GBDK uye iyo inouyawo ne ...
Data Accelerator yakatanga mu2017 seyakakura-dhata yekugadzirisa dhizaini muMicrosoft's Dhivhisheni Chikamu icho pakupedzisira ...
RawTherapee anomira kuve anokwanisa kuve nerutsigiro rwekugona kutsigira huwandu hwakawanda hweRAW mafomati emafaira, kusanganisira aya anobva kumakamera ane ...
Mushure memakore maviri ekuyedza uye kusimudzira, Mozilla yakaunza iyo WebThings chikuva, inova kusangana kweWebThings Sisitimu mapurojekiti.
Iyo SatNOGS (Satellite Open Ground Station) chirongwa chemahara software uye yakavhurwa sosi Hardware chikuva chekugadzira network ...
GIMP 2.10.10 yave kuwanikwa kurodha pasi uye kumisikidza. Iyo inouya nehupfumi hwenhau uye kugadzirisa bug.
Iyo Apache Software Foundation ichangobva kuzivisa iyo nyowani vhezheni yeApache NetBeans 11.0 yakasanganiswa yekusimudzira nharaunda ...
BleachBit ndeyekusarudzika rakanakisa dhisiki yekuchenesa zvinoshandiswa (senge makuki, zvakapatsanurwa, nezvimwewo) uye kune imwe nhanho dziviriro uye optimization
ispell murairo unozoshanda seChirungu cheki kana uchitarisa kuti zvatakanyora ndezvechokwadi here kana kwete. Uye zvese kubva kuTerminal.
Pasina kuita ruzha rukuru, Mozilla yakaburitsa Firefox 66.0.2, iyo vhezheni inogadzirisa akasiyana webhu inoenderana uye inowedzera maviri ekuchengetedza mabara.
KDE Kunyorera 19.04 yanga iri mukuvandudza kubvira kutanga kwaKurume uye ikozvino beta vhezheni yacho yakagadzirira kuyedzwa neruzhinji ...
Linux Foundation inoramba ichikura uye ikozvino inowedzera chikuva chitsva chinonzi Linux Kernel Mentorship inonakidza kwazvo kune vanopa mazano
Quarkus hutsva hutsva hwenzvimbo yeJava iyo inomhanya pane Kubernetes gore chikuva, nekudaro kukwezva Java vanogadzira
Iyo Article 13 inobvumidzwa neEuroparliament inochinja sei zvatinoita paInternet muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Tinokuudza ...
Kubernetes 1.14 inosvika iine yekuwedzera kutsigira Windows midziyo
Nezuro, timu inoona nezvekuvandudzwa kwayo yakaita chiziviso chekuwanikwa kweKubernetes 1.14 iyo inosanganisira 31 yekuvandudza.
Motrix ndeye yemahara, yakavhurwa sosi yekurodha maneja inomhanya paLinux, macOS, uye Windows. Iyo ine rutsigiro kurodha pasi ...
KStars muchinjikwa-chikuva software yekuongorora nyeredzi iyo inoteedzera iyo planetarium. Icho chikamu che KDE. Inobvumidzwa pasi pemitemo yeGPL.
Iyo nyowani yekugadzirisa vhezheni yeakakurumbira LibreOffice hofisi suite yakaburitswa nguva pfupi yadarika, ichisvika iyo ...
Isu tinokuudza izvo izvo Chrome DevTools ndezve, zvishandiso zvevagadziri varipo mune iyo Chrome uye Chromium web browser
Firefox 67, iyo inotevera vhezheni yeMozilla's browser, yave kuwanikwa kuyedza. Muchikamu chino tinokuratidza nhau dzayo dzese.
Ghidra ndeimwe yemazhinji akavhurwa sosi software mapurojekiti akagadzirwa mukati meNational Security Agency ...
nezuro vanhu veWindows vakazivisa kuti vari kuzoita yavo "Windows Calculator" chirongwa chakavhurika sosi chirongwa paGitHub.
ZveMotokari Giredhi Linux OS uye chimiro chemotokari
AGL UCB ipuratifomu yepasi rose yekushandisa mune dzakasiyana siyana mota, kubva pamadhibhodhi kusvika kumadhizaini masystem ...
Iyo nyowani vhezheni yeWireshark 3.0.0 yakaburitswa nezuro, ichitsiva iro risingachengetedzwe kutora raibhurari ye ...
Kubatana inguva yakakurumbira injini yemutambo, kunyanya kune ayo akazara uye ari nyore kushandisa ekugadzirisa maturusi. Pasina…
Vhura Broadcaster Software inozivikanwawo nechidimbu chayo seOBS iri yemahara uye yakavhurika sosi yekushandisa ye ...
Mimhanzi yekushambadzira masevhisi akawana akawanda mukurumbira mune yakadaro pfupi nguva uye ivo vava ...
Kugadzira typeface haina kuoma sezvaungafunge, saka zvirinani kuti uverenge ...
OpenEXPO inotiunzira nhau newebhuinar muna Kukadzi 28, 2019 uye zvakare nezvimwe zvinonakidza zvekupa mazano.
Vagadziri veiyo Tor projekiti vakaburitsa iyo OnionShare 2 zvinoshandiswa, izvo zvinokutendera iwe kuti uchengetedze uye ugamuchire mafaira
Cygwin muunganidzwa wematurusi akagadzirwa naRed Hat kupa maitiro akafanana kune Unix masisitimu paMicrosoft Windows.
Syswall chiitiko chitsva chakanangana nekugadzira fanano yemasimba ekudzivirira moto kusefa kuwanikwa kweanoshandisa maitiro kufona.
Iyo Gwaro Sisekelo munguva pfupi yapfuura yakazivisa kuburitswa kweLibreOffice 6.2 hofisi suite. Kune avo venyu vasingazive LibreOffice parizvino, izvi ...
Wakamboshandisa Python, Wordpress, Ruby, C, C ++, Apache? Iwe une chikwereti rusununguko rwezvirongwa izvi uye zvimwe zvakawanda kuGNU uye yayo GPL rezinesi.
lowblade inoshandisa bhaisikopo-dhizaini yekuisa yekugadzirisa modhi sekufamba kwayo kwebasa ine dhizaini nzira yakafanana neiyo Avid.
Munguva pfupi yapfuura vagadziri vari kutarisira iyo Android-x86 chirongwa vakaburitsa yekutanga yakagadzikana vhezheni inoenderana neiyo Android 8.1 chikuva.
Nguva dzanhasi dzevadzidzi dzakanakisa nekuti vanogona kubata zvese pane yavo laptop, ...
MKVToolNix muunganidzwa wematurusi eMatroska multimedia mudziyo (MKV) fomati yakagadzirwa naMoritz Bunkus. Inoitira Matroska ...
Midori, iyo isina kureruka browser par kugona, yadzoka kubva kuvakafa uye mushure memakore maviri yakagadziridzwa nekuvandudza kukuru
Munyika yeLinux pane huwandu hukuru hwezvishandiso zvemarudzi ese ezvinangwa, kubva kune vanogadzira mifananidzo, ...
Ese makuru makuru enhau enhau akapa vashandisi nzira yekutaurirana nevamwe, sevateveri, ...
FastoTV iptv chikuva chekutarisa terevhizheni pane internet, yemahara uye yakavhurika sosi ine ...
Iyo nyowani vhezheni yeBusyBox 1.30 inosvika pamwe nekuvandudzwa kutsva
Munguva pfupi yapfuura, iyo BusyBox package yakavhurwa mushanduro 1.30 nekumisikidzwa kweseti ye ...
Auryo, muchinjikwa-chikuva unofficial mutengi we Soundcloud
Soundcloud ipuratifomu inonakidza yekugona kutsvaga nekuteerera kumumhanzi, mugadziri Jonas Snellinckx akagadzira Auryo, application
FreeOffice ndeyemahara office otomatiki software yekushandisa kumba uye bhizinesi. Ndeipi iri yemahara vhezheni yeSoftMaker Hofisi suite ...
Mozilla nguva pfupi yapfuura yakazivisa kuvhurwa kweFirefox webhu bhurawuza mune yayo nyowani vhezheni 64, pamwe neye mobile vhezheni yeFirefox 64 ...
Fractal: mameseji kunyorera kweMatrix protocol
Matrix iprotocol yakave yakagadzirirwa kuitirwa mameseji akaisirwa pakarepo ayo achangobva kukura mukuzivikanwa.
Cisco yakaburitsa vhezheni yakakosha yeClamAV package inosvika vhezheni yayo 0.101.0 iyo iyo inowedzera nyowani nyowani uye ...
Raven muverengi iri nyowani nyowani RSS muverengi kunyorera, iyo yakavhurwa sosi uye muchinjikwa-chikuva (cheWindows, MacOS uye Linux) ...
Kana iwe uri programmer uchitsvaga yemahara uye iri nyore kushandisa kodhi mhariri, unogona kusarudza CudaText, ichi chinyorwa sosi yekodhi ...
Nhasi tine mufaro wekubvunzurudza Paul Brown, munhu akakosha munyika yepachena software, Linux uye KDE ...
GRV inopa mushandisi nzira yekutarisa uye kutsvaga zvinongedzo, zvibvumirano, maforogo, uye misiyano nekushandisa makiyi anosungwa ...
LibrePCB iri redunhu mupepeti uye yakavhurwa sosi (GNU GPLv3), yemahara EDA software yekuvandudza matunhu emabhodhi.
Iye zvino unogona kushandisa iyo Flatpak Kill yekuraira kuti uvhare zviitiko zveFlatpak, ziva zvese zvese nezve iyi nyowani nyowani.
Iyo nyowani vhezheni yeShotcut 18.11 yakatoburitswa neyakagadziridzwa nyowani uye nezvimwe
Munguva pfupi yapfuura pakange paine kusunungurwa kweiyo vhidhiyo mupepeti Shotcut, iyo inouya mune yayo nyowani vhezheni 18.11 iyo inovandudza iyo ...
Yechisere edition yeLibrecon yakatoburitsa chirongwa chitsva chezviitiko zvechiitiko icho vese vanoda software yemahara vanoda kuenda
Mergify ndeye automation sevhisi iyo inobatsira kusanganisa GitHub kudhonza zvikumbiro otomatiki.
Iyo nyowani yekugadzirisa inogadziridza yeKDE Zvikumbiro 18.08 inoratidza kupera kwehupenyu hwayo kutenderera, iwo manyowani nyowani anosvika muna Zvita
Maviri matsva eLibreOffice akarova veruzhinji, LibreOffice 6.1.3 inouya yevashandisi vemberi uye LibreOffice 6.0.7 yevashandisi vevashandi
Poppler ine raibhurari yekupa raibhurari uye zvishandiso zvemutsetse wekuraira zvinoshandiswa kushandura mafaera ePDF
Mushure menguva yakareba pasina vhezheni yakaburitswa (iyo yekupedzisira alpha vhezheni yakatanga kubva muna2012), beta vhezheni ichangoburitswa!
Datafari ndeye yakavhurwa sosi bhizinesi yekutsvaga software iyo inoshandisa Apache Solr yeiyo indexing uye… zvikamu.
Big Data ishoko rinoshandiswa kutsanangura kuunganidzwa kwemahombe data ayo anokura zvakanyanya nekufamba kwenguva.
Natron ndeye yemahara yekugadzira software yakavakirwa padunhu, muchinjika-chikuva uye yakavhurwa sosi ine rezinesi yeruzhinji (GPLv2), iyi software ...
Iyo Nextcloud faira yekugovana chikuva yakagadziridzwa kune yayo nyowani vhezheni 14, kuunza nyowani maficha, bug fixes
Iyo Gwaro Foundation yaburitsa bhagi gadziriso vhezheni yeichangobva kuburitswa Hofisi suite, Libreoffice 6.1.1. The…
BitWarden ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi password password iyo inogona kuitirwa munzvimbo yayo uye iine vatengi ku ...
Kubudikidza neshoko rakakosha, vagadziri veGIMP vakaburitsa vhezheni itsva yeiyi software yekunyengedza software, nokudaro ...
ScreenKey chishandiso chakavhurika sosi chishandiso icho iwe chauchazokwanisa kutsigira nekuti nacho uchakwanisa kuona akakosha marejista
MuseScore inozivikanwa, yemahara uye yakavhurwa sosi mimhanzi notation software ine rezinesi pasi peGNU GPL General Public License.
HomeBank ndeye yemahara, yakavhurwa sosi, GPL vhezheni 2 ine rezinesi, muchinjika-chikuva wega accounting account. Ichi chishandiso
LAN Kugovana ndeye yemahara, yakavhurwa sosi, muchinjika-chikuva kuchinjisa kunyorera, kwakavakwa uchishandisa Qt uye C ++ GUI fomati.
FruityWifi ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi chishandiso chekuongorora isina waya netiweki. Inotendera mushandisi kushandisa zvishandiso zvakasiyana zve
Iyo hofisi suite iyo ine akati wandei zvirongwa mukabhuku yayo, pakati payo yatinowana Munyori, Calc uye nezvimwe ...
Yakagadziriswa neXnSoft timu (ivo vagadziri veXnViewMP application), iyo inoshandisa iyo XnViewMP batch yekugadzirisa module.
Isu tinoenderera mberi nekuisirwa mamwe masisitimu echigadzirwa chedu chidiki, ino nguva inguva yekutendeuka kweApple TV
RetroArch inoratidzira emulators, injini dzemitambo uye vatambi venhau iyo yakagadzirirwa kukurumidza, kupenya, kutakurika uye isina ...
Kodi inozivikanwa yakawanda-chikuva midhiya nzvimbo
Kodi yaimbozivikanwa seXBMC inzvimbo yekuvaraidza yemultimedia, inogoverwa pasi peGNU / GPL rezinesi. Kodi inotsigira ...
Wekan ndeye yemahara uye yakavhurika sosi yekushandisa inoenderana nepfungwa yeKanban, izwi rechizvarwa cheJapan iro rinoreva "kadhi" kana "chiratidzo". Iyi pfungwa inowanzoenderana nekushandiswa kwemakadhi (post-iyo nevamwe) kuratidza kufambira mberi kwekugadzirwa kuyerera mumakambani.
Mune ino chinyorwa nyowani chakanyanya kutarisana nevashandisi vatsva, maitiro ekugadzirisa Atom kuitira kuti itibvumidze kushanda nemutauro weC programming mune yedu system. Nekuda kwehunhu hweAtom mupepeti, inowanzo kuve yakajeka panguva yayo yekumisikidza maitiro.
Atom yakavhurwa sosi sosi kodhi mhariri yeMacOS, Linux, uye Windows1 nerutsigiro rwema plug-ins akanyorwa muNode.js uye yakavakirwa-mukati yeGit vhezheni yekudzora, yakagadzirwa neGitHub. Atom iri desktop application inovakwa uchishandisa matekinoroji ewebhu.
Ardor ndeye muchinjika-chikuva dhijitari odhiyo yekushandira iyo iwe yaunogona kushandisa kune multitrack odhiyo uye MIDI kurekodha, kugadzirisa, uye kusanganisa kweodhiyo. Ichi chinovhurwa sosi yekushandisa, inogoverwa pasi peGNU General Veruzhinji Rezinesi.
DJ Mixxx ndeimwe nzira yakanakisa yeVirtual DJ kana wanga uchimhanya kubva kuWindows uye uchitsvaga zvakafanana application yeLinux Iyo yemahara uye yakavhurwa sosi multiplatform application (Linux, Windows uye Mac) iyo inotibvumidza isu kugadzira musanganiswa.
Havasi vanhu vazhinji vanogona kunge vachiziva nezveMicrosoft's Quantum Dev Kit, asi vanofanirwa kunge vakanzwa nezvehuwandu hwekomputa uye ramangwana rekudenga iro bazi idzva remakomputa rinoita serino vimbisa.
FFmpeg yakagadziridzwa munguva pfupi yapfuura ichiuya mushure memwedzi mitanhatu ye3x dzakateedzana, FFMpeg 4.0 inosvitsa mafirita e bitstream yeazvino H.264, MPEG-2 uye HEVC metadata yekugadzirisa, yekuyedza yeMicrosoftYUV encoder.
GnuCash ndeye yemahara yemunhu mari yezvemari pasi peGNU General Public License (GPL) uye multiplatform, ichi chishandiso chinoshandisa iyo yekupinda yakapetwa kureva, GnuCash inonyora zvinyorwa zviviri, imwe yake inofanirwa uye imwe yechikwereti uye huwandu hwezvikwereti nezvikwereti. zvinowirirana.
FreeCAD muchinjiko-chikuva chakavhurika sosi yekushandisa nerutsigiro rweWindows, Mac neLinux yakagadzirirwa kunyanya kugadzira zvinhu zvehupenyu chaihwo chero saizi. Parametric modelling inokutendera iwe kushandura zviri nyore dhizaini yako nekudzokera kune yako yemhando nhoroondo uye nekuchinja ayo parameter.
Emulators anokutendera iwe kunakidzwa nemhando dzese dzekare uye yakatarwa mitambo zvese kubva kunyaradzo yesystem yako, pasina kuita kuti uwedzere kubatana kana kuwedzera Hardware kukombuta yako. Semuenzaniso, unogona kutamba Nintendo 64, Nintendo Wii, Game Cube uye Sega mitambo paLinux ine chaiyo emulator
Nhasi ndichagovana newe maitirwo atingaite XAMPP atinozozvitsigira nawo kuti tikwanise kumisikidza yedu yewebhu server pakombuta yedu, kungaita bvunzo dzemukati kana kuvhura michina yedu saizvozvo.
Iwo maOver Open Awards adzoka, iyo 3rd Edition yeakakoshesa mibairo mune yakavhurwa sosi uye yemahara software chikamu kubva kuOpenExpo Europe 2018. Tinokukoka iwe kuti upinde uye usapotse nhau dzinonakidza ...
Stellarium ndeye yemahara yemahara software chirongwa chakanyorwa muC uye C ++, iyi software inotibvumidza kutevedzera planetarium pakombuta yedu, Stellarium inowanikwa yeLinux, Mac OS X uye Windows.
Iyo yakavhurika-sosi, yekuyambuka-chikuva Atom zvinyorwa edhita yakagadziridzwa kune vhezheni 1.25 kuisa akawanda maficha matsva uye kuita kwekuvandudza.
Iwo akakurumbira maChromium neFirefox mabhurawuza izvozvi ave kuwanikwa muUbuntu seSnaps yekuisa nemirairo imwechete
Iyo inozivikanwa hacker group Fail0verflow yakwanisa kuisa Linux pane iyo Nintendo Chinja uye woishandisa sehwendefa rizere
Iyo Gwaro Foundation yatanga kushanda paLibreOffice 6.1, tinokuudza iwe nhau dzinosvika muna Nyamavhuvhu
Iyo nyowani yekuvandudza nhamba 1.24 yeAtomu iri pano, isu tinokuudza iwe ruzivo pamwe nekutanga shanduko dzeiyo beta vhezheni.
Mifananidzo yakagadziridzwa yeFedora 27 iri pano kuti ikudzivirire paMeltdown uye Specter, ikozvino unogona kuzvirodha pasi nekuita yakachena kuisa.
MegaMario idombo reiyo yakasarudzika Nintendo Mario mutambo, iyi vhezheni ine resolution yepamusoro iyo yakakodzera kune makuru makuru skrini, saka iine zvese maficha emutambo wepakutanga.
Barcelona yakazivisa shanduko huru, zvakarongwa kuti mu2019 hapana hurumende kana komputa-inoshandisa veruzhinji inoshandisa Windows.
Iyo Mysql Kukanganisa kwakawanda kwakawanda kwakatangira muganho wekuuya kwekubatana, mune ino posvo tichaona maitiro ekugadzirisa.
qBittorrent ipuratifomu, yemahara uye yakavhurwa sosi P2P mutengi, yakavakirwa paC ++ uye python, chirongwa ichi chakavakwa nevanhu ...
Imwe nguva yapfuura pakanga paine dzimwe nzira dzakawanda dzeemail services dzaivepo, ndichiri kurangarira kuti imwe ye ...
Firefox Quantum yatove mune yayo Beta vhezheni, vhezheni ichatipa, pakati pezvimwe zvinhu, kushoma ndangariro kushandiswa uye nekukurumidza kumhanya.
Mazuva eGoogle Zhizha reKodhi akaitika samazuva ese. Ino nguva, imwe yeakanyanya kubatsirwa kunyorera yave KDE Edu.
Krita 3.3. Iyo inouya yeLinux, yeWindows uye yeMac, ichiunza ihwo hutsva maficha senge akavandudzwa mashandiro.
Intel yazvino mudziyo tekinoroji yekuvandudza inovimbisa hukuru hwekuita uye kusanganisa kwekuvandudza.
Xen rave iro rakanyanya kusimba maitiro ekuona muindasitiri. Kune avo vasati ...
Iwe unenge watoziva OpenBSD, inoshanda system kubva kumhuri yeBSD. Kana iwe usingazvizive, iri ...
Android Samba Mutengi: Google mutengi wefaira rekugovana neWindows
Google yakaburitsa Android Samba Client yeiyo Andy's inoshanda sisitimu. Kubatana pakati peye nharembozha nemakomputa ...
OpenExpo inovhurazve mikova yayo muna Chikumi 1 kuMadrid, kunyanya ichaitika kuLa N @ ve. Hezvo izvo ...
Nhasi kudzokororwa kwekupedzisira kweshanduro iyi kwabuda, iri 5.2.7 yekupedzisira vhezheni inotakura iyo nhamba 2 kuseri kwe5 muLibreOffice.
Munguva yehackathon dhigi rakakomba rakawanikwa mukati meMozilla Firefox 52, iyi bug yakagadziriswa mumaawa makumi maviri nemaviri chete neMozilla ...
NaGhostwriter, avo vakazvipira kunyora vanogona kushanda nechishandiso chinovabvisa pane zvinokanganisa.
Microsoft inoenderera neFree Software, mune ino posvo tinotaura nezve akatiwandei maMicrosoft program atinogona kurodha pasi nekuisa pane Linux ...
Isu tatova neMozilla Firefox browser inowanikwa mushanduro 52, vhezheni inowanikwa kurodha pasi nekuisa.
Gore rakapera isu takatozivisa chiitiko cheLinux neTapas pane yedu blog. Sezvaunenge uchitoziva, chiitiko icho ...
Cerebro ndeimwe nzira yekutarisa iyo yatinogona kuisa pane yedu Gnu / Linux uye iine customizable application Launcher pane desktop yedu ...
SuSE ichaita chiitiko muna Kukadzi 14, 16 uye 21 kune nyanzvi muchikamu, kana kufanana navo ...
Shamwari dzedu kuOpenEXPO dzakatungamira kugadzirwa kweEbhuku pane Open Source Maitiro uye Mahara Software. Kuti uzo…
Tine nhau dzakanaka dzevadi vemahara software. Hofisi suite yemahara yekushandisa par kugona yakagadziriswa. Zviri nezve LibreOffice.
Mushure menguva yakareba yekuvandudza, Calligra, imwe yemahofisi edu epamoyo pamwe neLibreOffice uye ine nyowani ...
Kutenda kukambani AGL (YeMotokari Giredhi Linux), isu tichavawo neLinux mumotokari yedu mune ramangwana, riri padyo.
Gwaro reSiseko rakangosheedzera kuburitswa kwekuwedzeredzwa uye matemplate eLibreOffice, akakwana kuzadzisa MUFFIN.
LibreOffice timu yekuvandudza yazivisa uye yaunza yayo nyowani MUFFIN interface, interface iyo yakarongerwa kuburitswa muna Ndira.
Nhasi, Krita 3.1 yabuda, software ine simba yakatsaurirwa kugadzira pendi yedhijitari yemhando yepamusoro inogoneka.
Isu tinokuratidza mamwe manomano uye tinokupa iwe inonakidza gwara raunogona kuwana rako reWordpress peji muchimiro uye uine bhizinesi rinobudirira.
Isu tataura kare pane dzimwe nguva nezve yemahara Hardware uye iyo opencores.org chirongwa, uko kune akawanda chip mapurojekiti e ...
NAS4Free 11 ndeye BSD-yakavakirwa sisitimu yekumisikidza yekuchengetedza system kana Kuchengeta (NAS). Zvakafanana neFreeNAS,…
Parrot SLAMdunk yakavhurika Hardware uye software kit iyo inobvumidza kuvandudzwa kwedrones kana isina anomman ndege….
Iko kutove neshanduro nyowani yeakakurumbira ReactOS inoshanda sisitimu. Iyi ReactOS 0.4.3, inouya nezvimwe zvinhu zvitsva ...
Kunyangwe anga achingova maawa makumi mana nemasere kubva Firefox 48 yabuda, timu yeMozilla yatotanga kuvandudza vhezheni 50.
E-commerce iri kuwedzera uye mune ino chinyorwa tinokuratidza iwe zvaunoda kuti umise yako wega LAMP server uye yepamhepo chikuva chechitoro.
Mushure mekushanda nesimba rekuvandudza, isu tatova pano neiyo nyowani nyowani Firefox 50 browser, bhurawuza rine nhau dzakakosha.